Network Cables – Tagged "Cat6Ethernet Cables" – ICT.com.mm
Digiguard CAT6 Network Cable - 60MK100,000
Link Cat6 Patch Cord (10M)K53,096
Netdc EC-UU004-6-PE-BK Cable U/UTP4pair Cat.6 Cable (305m)K242,432
Paramount Cat6UTP Keystone Jack (180 Degree Toolless)K11,289
Paramount Faceplate Kit Single PortK9,237
Digiguard CAT6 Network Cable - 60M
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Length: 60m/180FT Standard: ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B.2
Link Cat6 Patch Cord (10M)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Length: 10 meter CAT6 Ethernet Cable suitable for connecting your laptop, PC and Network device. Super-Fast Cat6 so will handle high speeds easily. Easy to connect simple...
Netdc EC-UU004-6-PE-BK Cable U/UTP4pair Cat.6 Cable (305m)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Category:6Bandwidth, MHz: 250 Construction: U/UTP Conductors material: Bare copper Conductors type: Solid Conductors insulation material: HDPE Conductors insulation thickness, mm: 0,20±0,02 Conductors insulation outer diameter,...
Paramount Cat6UTP Keystone Jack (180 Degree Toolless)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: PRN-KJ-TL-180 180 Degree Toolless Warranty: 1 Year
Paramount Faceplate Kit Single Port
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: PRN-FP-45-1P Faceplate with permanent dust cap Fitted with withdrawal label Material ABS high-strength resistance UV Design of mill finish, increase the matching with heavy current faceplate...
Paramount Faceplate Kit Dual Port
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: PRN-FP-45-2P Faceplate with permanent dust cap Fitted with withdrawal label Material ABS high-strength resistance UV Design of mill finish, increase the matching with heavy current faceplate...
Paramount Cat6 UTP Patch Cord 3M (CAT6 U/UTP 4PR,26AWG,Grey)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: PRN-PC-C0-03M Cat6cables areagreat option for high density patch panel setup, where every bit of space matters. It is commonly used where performance,...
Paramount Cat6 UTP Patch Cord 1.5M (CAT6 U/UTP 4PR,26AWG,Grey)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: PRN-PC-C0-1.5M Cat6cables areagreat option for high density patch panel setup, where every bit of space matters. It is commonly used where performance,...
Commscope CS30 Cat6 Cable Box (305m)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Cable Type: Network Ethernet Cable Cat: Cat6Outer Shield: U/UTP Unshielded Conductor Stranding: Soild Number of Conductor: 8 Operating Frequency(Max): 250MHz Operating Voltage: 80V Cable Length:...
Merry Mesh UTP Cat6Cable (305m)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Cable Type: Network Ethernet Cable Cat: Cat6Colour: Blue Outer Shield: Unshielded Conductor Stranding: Soild Number of Conductor: 8 Cat6cable is ideal for your...
Gold Power Cat6 3M Network Cable
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Cable Type: Network Ethernet Cable, Cat: Cat6Length: 3m Colour: Blue
Prolink UTP CAT6 23U Cable Bare Copper Lan Cable (SN0070024)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ CONDUCTOR CONSTRUCTION: 1/0.530±0.005 (AWG) CONDUCTOR MATERIAL: BARE SOLID COPPER CONDUCTOR INSULATION MATERIAL: HDPE INSULATION OD: 0.98±0.05 (mm) AVERAGE THICKNESS: 0.21(REF) (mm) COLOUR 1P. BROWN & WHITE /...
Link Cat6 Patch Cord (1M)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Length: 1 meter CAT6 Ethernet Cable suitable for connecting your laptop, PC and Network device. Super-Fast Cat6 so will handle high speeds easily. Easy to connect simple...
Paramount Cat6Cable 300M
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: PRN-C6-ID-UTP4 UTP 4P, CMR, 23 AWG 250 MHz, 300m 100% Performance tested New Hdpe Solid Copper Network ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် Paramount အမှတ်တံဆိပ် Cat6ကေဘယ်လ်ကြိုးဖြစ်ပါသည်။ အရှည် (၃၀၀)မီတာ...
3 × TRENDnet TC-C604 Cat6 1.5M Patch Cord
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Cable Type: Network Ethernet Cable Cat: Cat6Colour: Blue Outer Shield: Unshielded Conductor Stranding: Soild Number of Conductor: 8 မှတ်ချက်။ ။ (Cat6 Cable) ကြိုး (3)ခု ပါသည်။...
3 × TRENDnet TC-C603 Cat6 3M Patch Cord
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Cable Type: Network Ethernet Cable Cat: Cat6Colour: Blue Outer Shield: Unshielded Conductor Stranding: Soild Number of Conducto: 8 မှတ်ချက်။ ။ (Cat6 Cable) ကြိုး (3)ခု ပါသည်။...
TRENDnet UTP4pair Cat6Network Cable 23AWG
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: TC-C6305 UTP PVC4Pair CAT6(23AWG) Support Gigabite wired transmission speed. Remove network bottlenecks with Gigabit bandwidth Perfect for VoIP,video and file transfers Performance...